विचारधारा सही छ भने क्रान्ति सम्भव हुनसक्छ - खबरम्यागजिन
Homeम्यागजिनविचारधारा सही छ भने क्रान्ति सम्भव हुनसक्छ
March 28, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि म्यागजिन, संवाद, साभार 0
शशिप्रकाश चारु मजुमदारसँगै नक्सलबाडी आन्दोलनमा लागे र आन्दोलनबाट अलग्गिने पहिलो चरणका नेतामध्ये एक हुन् र उक्त आन्दोलनका कमजोरीको पहिलो आलोचक पनि। ‘कोयेकाफ पर संगीत साधना’ र ‘पतझढका स्थापत्य’ जस्ता कविता सङ्ग्रहमार्फत प्रगतिवादी कविको सूचीमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका शशिप्रकाश मूलतः राजनीतिक चिन्तक हुन्। राजनीतिक अर्थशास्त्रमा विशेष दक्खल राख्ने उनले आलोक रञ्जन र दिपायन बोस नाममा विभिन्न राजनीतिक र आर्थिक लेख लेखेका छन्। मार्क्सवादी सैद्धान्तिक पत्रिकाका सम्पादक रहेका शशिप्रकाश राजनीतिक अभियन्ता पनि हुन्। उनीसँग मार्क्सवादी आन्दोलन, यसको अवसान र उत्थान तथा समकालीन विश्व राजनीतिबारे लक्ष्मण श्रेष्ठले अन्नपूर्णपोष्ट–को निम्ति गरेको कुराकानीः साभार गरिरहेका छौँ-सम्पादक
अहिले संसारभर कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर देखिन्छ। कुनै पनि देश समाजवादी छैन, तपाईं भने मार्क्सवाद र समाजवादकै कुरा गरिरहनुभएको छ। अहिले यस्तो कुरा गर्नुको अर्थ छ र ?
सबैभन्दा पहिला के बुझ्नपर्छ भने मार्क्सवाद विज्ञान आजको राजनीतिक, आर्थिक, तथा सामाजिक संकटको विश्लेषण गर्नका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी छ। पुँजीवादमा आउने संकटबारे मार्क्सले गरेको अनुमानलाई लिएर राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा नाम कहलिएका पुँजीवादी बुद्धिजीवीले पनि मार्क्सको प्रशंसा गरिरहेका छन्। जहाँसम्म समाजवादको असफलतालाई लिएर केही व्यक्तिले मार्क्सवादको असफलता भन्ने गरेका छन्, त्यो गलत छ। यो मार्क्सवादको नभई समाजवादको केही प्रयोगको असफलता हो। जस्तै, विशेष सापेक्षतावादको सिद्धान्तसँगै सन् १९०५ मा आइन्स्टाइनको चर्चित समीकरण आयो, तर सन् १९४० को दशकमा मात्रै वैज्ञानिकहरू अणुलाई ऊर्जामा रुपान्तरण गर्न सफल भए।
यो चार दशकमा कयौं वैज्ञानिकका प्रयोग असफल भए। ती असफलता आइन्स्टाइनको सूत्रको असफलता थिएन। त्यसैगरी सोभियत संघले गरेको समाजवादको पहिलो प्रयोगको असफलता आफैंमा मार्क्सवादको असफलता थिएन। सोभियत संघले निजी स्वामित्वको सामाजिकीकरणका लागि गरेको पहिलो प्रयोग केवल साढे तीन सय वर्षको पुँजीवादसँगको सङ्घर्ष थिएन, यो त करिब साढे चार हजार वर्षदेखि स्थापित निजी स्वामित्वसँगको सङ्घर्ष थियो। यति ठूलो सङ्घर्षको पहिलो प्रयोग ३०/४० वर्ष टिक्यो, त्यो नै ठूलो कुरा हो। यो समाजवादको पहिलो क्रान्ति थियो, त्यो असफल भयो। पहिलो क्रान्ति प्रायजसो असफल नै हुन्छन्, जसरी क्रामबेलको नेतृत्वमा भएको बेलायती क्रान्ति पनि असफल भएको थियो।
अहिले भारतमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेका समूह यो कार्यभार पूरा गर्न सक्षम छैनन् ?
जरुरी छ, तर लामो तयारी, खुला काम, आम संगठन र एक समयमा आम विद्रोह हुनसक्छ। गुरिल्ला युद्धजस्तो सशस्त्र सङ्घर्षको अब अर्थ छैन।
के तपाईं जीवनमा कहिल्यै पनि निराश हुनुभएन ?
यस्तो त कोही पनि हुँदैन। तर यसलाई समयरेखामा हेर्नुपर्छ। जो पनि कुनै क्षण विचारशून्य हुन्छ, बसेर २०/२५ कप चिया खान्छ, प्रकृतिको काखमा जान खोज्छ। यदि यसलाई सापेक्षिक निराशा मान्ने हो भने निराश भइयो होला, तर कहिल्यै विशादग्रस्त भइएन। म निकै तल्लो समुदायबाट आएँ, सडकपेटीमा सुतें, उद्योगमा काम गरें। आईए पढ्दादेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागें। त्यतिबेला मैले चर्चित महापुरुषको अवसान भइरहेको देखें। यदि निराश हुनु थियो त त्यतिबेलै भइन्थ्यो। कला, साहित्य, संस्कृति, कविता र संगीतले मलाई निराश हुन दिएनन्।